Shirkadda Al-Nuur Oo Carruurta Xarunta Agoomaha Ugu Deeqday Dharkii Ciidda | Somaliland Post
Home News Shirkadda Al-Nuur Oo Carruurta Xarunta Agoomaha Ugu Deeqday Dharkii Ciidda
Shirkadda Al-Nuur Oo Carruurta Xarunta Agoomaha Ugu Deeqday Dharkii Ciidda
Hargeysa (SLpost) – Shirkadda Al- Nuur ayaa xarunta agoomaha Hargeysa ugu tabarucdday dharka Ciidda ee caruurta Xaruntaasi oo ka kooban shan boqol iyo sagaal qof.
Agaasimaha Xarunta Agoomaha Hargeysa
Munaasibad loo sameeyay Deeqdan Shirkadda ganacsiga ee Al Nuur Furniture Company ay kaga farxisay Boqolaalka caruurta ah ee ku jira Xarunta agoomaha ee Caasimadda Hargeysa waxaa ka hadlay maamulaha xaruntaas Marwo Caasha Maxamuud Qaalib oo u mahadnaqday shirkadda Al-Nuur oo ay sheegtay inay mulkiileheedda u ahaan jirtay macalimad waqti ay ka howl-geli jirtay dugsiga Biyo-dhacay Ee Hargeysa. “Waxaan halkan ku qaabiley oo noo yimi shirkadda Al-Nuur ee uu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Nuur oo ah ganacsidde dhalinyaro ah oo ganacsigiisa Ilaahay Barkeeyay.
Cabdiraxmaan Nuur - Mulkiilaha AL-NUUR COMPANY
Al Nuur waxaa uu kafaalo-qaatay inuu Ciidan Ramadaan caruurta Xarunta Agoomaha ku jirta oo da’walba leh Ilaa ilmaha dhashay ee la noo keenay hadda illaa Ilmaha Jaamacadda ku jira waxaa uu kafaallo qaatay Dharkooddii Ciida oo dhameystiran, kuwaasoo isugu jira, Shaadhadhkii, Saraawiishii, Kabihii, Garamaantii iyo sharabaadaddii. Dharkaasi waxay ka kooban-yihiin oo ay u xidhmayaan 509 (Shan-Boqol iyo Sagaal qof.) oo isku joog ama mar xidhasho oo aanu qofka waxba ka dhinmayn. waxaan leeyahay Cabdiraxmaan ama Shirkadda Al Nuur aad iyo aad ayaanu kuugu mahad celinaynaa, waxaanan Ilaahay kaaga rajeynaynaa inuu Ganacsigaagu noqdo mid Caalamka oo dhan ku baaha.”
Abokor, xisaabiyaha Shirkadda oo Dharka kala guraya
Marwo Caashi waxay sheegtay in ay shirkadda Al-Nuur iyadu iskeed tabarucan u fiddisay, Islamarkaana ay tahay shirkaddii ugu horeysay ee waxtarka intaa leeg u fidisa Xarunta agoomaha iyagoo waliba aan ka dalban oo aan yabooh weydiisan. waxaana ay shacbiga kalle iyo shirkaddaha ugu baaqday inay ku daydaan Mulkiilaha Shirkadda Al Nuur.
Dharka oo karaatoon ku jira
siddoo kalle, waxa halkaa ka hadlay Abokor Sh. Axmed Geedi oo ka socday Shirkadda Al Nuur, waxaana uu yidhi. “Anigoo ka wakiil ah shirkadda Al Nuur, sidda ay maamulaha xarunta agoomaha Hargeysa idiin sheegtay, waxaanu halkan keenay shan boqol iyo sagaal Labis oo dhameystiran oo aanu ugu tallo-galay in caruurta Xaruntani kulla faraxdo dadkoodda reer Somaliland, mana aha markii ugu horeysay ee aanu keenay Dhar halkan, sanadkii hore waxaanu keenay boqol caruur ah ciidood. waxaa kalle oo aanu balan-qaadnay sanad kasta in aanu ciidsiino haddii illaahay Idmo caruurta xaruntan ku jirta, taasina waa wax weyn oo shirkadda Al-Nuur qabtay. ciddii wax taraysa ee kallena waxaanu u jeedinaynaa baaq oo Xaruntani waa ay u baahan-tahay oo caruur ayaa ku nool aan aabo iyo cid lagu eego lahayn. waxaanan uga mahad-naqaynaa sidda wacan ee ay nooga gudoomeen, iyagoo sheegay in aanu nahay shirkaddii ugu horeysay ee Qalabka intaas leeg ugu tabarucdda. waxaananu rajeynaynaa in aanu sii wadno, halkan ayaanu ka bilownay, waxaananu rajeynaynaa in aanu goboladda kalle gaadhsiino haddii ilaahay Idmo.” Ayuu yidhi Abokor.
Noocyada kala duwan ee Shirkaddu ugu Deeqday Carruurta
Sidoo kale, Mukhtaar Biixi oo ka mid ah madaxda Shirkadda Al Nuur ayaa halkaas ka hadlay, waxaana uu tilmaamay in laftiisu ka mid ahaan jiray, waqti Caruurta ku jirta Xarunta Agoomaha Hargeysa ee weyn. taasoo uu muujiyay inuu dareensan-yahay xaaladooda, islamarkaana ku faraxsan-yahay inay shirkad ahaan taakuleeyaan Caruurtaas oo uu sheegay inay u yihiin waalid oo xil ka saaran-yahay qaranka oo dhan.
Xisaabiyaha Shirkadda oo isagu ku soo barbaaray Xarunta
Munaasibaddan waxaa siddoo kalle ka qayb-galay masuuliyiin door ah oo ka socday qaybo kalla duwan. iyaddoo marka la’eego, ay caruurta xaruntaas ku nooli riyaaq iyo rey rayn ay ku soo dhaweeyeen taakuladan loo fidiyay.